Buyekeza smartphone BlackBerry Torch 9800 kusukela ngokombono isihambi esingumakad 'ebona izivakashi — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Buyekeza smartphone BlackBerry Torch 9800 kusukela ngokombono isihambi esingumakad 'ebona izivakashi
BlackBerry 9800 Torch iye touted njengomunye wezinye Smartphones best eyake yaba "RIM" inkampani. Against isizinda imibono ehlukene kakhulu mayelana izinto ezintsha kusukela "RIM" inkampani (okubhekiselwa kuzo nangokuthi Torch) nganikwa umsebenzi othile ukuze ubhale isibuyekezo zale divayisi umbono othile ohamba okuningi, noma eziningi ukuphumula.
Nakuba i-OS-operating system 6 kakade kabanzi touted for ngcono okukhulu, ngombono wami, kwakusahlala ezikhishwe ngaphambi kwesikhathi. Uhlelo 6 imisebenzi operating system emsamo smartphone BlackBerry Torch 9800 namanje ngandlela-thile kahle ... ngisho noma Torch 9800 ufaneleke sithi: "Akukona impela i eqa ezikholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo, kodwa kakade ezingaphezu kuka gxuma triple!".
I ungenakho okuhlangenwe nakho komsebenzisi ngokwanele, ezincane kunalokho engangikucabanga kanye / noma kulindeleke. Wayengumuntu okuhle nokubi, ngokuba mina. A omuhle ngomqondo wokuthi imikhawulo ekhona OS 6 zamsiza lokhu kubuyekezwa short futhi, ngenxa yalesi sizathu, kujabulise. Nokho, Yini embi ngalo wukuthi le divayisi system / entsha yokusebenza baye esanda kukhululwa futhi manje awawona izici eyanele ukuze bondle ezihlukahlukene amazinga (ngaphandle, BlackBerry / RIM).
Kwaphakama izinkinga at ukwazana kuqala nge Torch. Ngemva ukukhipha izimpahla BlackBerry 9800 futhi pick it up once kwacaca ukuthi smartphone kunzima kakhulu BlackBerry amadivayisi odlule. Abanye, mhlawumbe, bangathi yebo ukuthi isisindo saso singamakhilogremu cishe like Droid (Droid-ish). Nokho, kuthatha isikhathi kancane ukujwayela kuso.
Uma uqale egijima, mina sasibhekene iqiniso lokuthi Torch bami beqinile BBM (BlackBerry Messenger) — amaklayenti osheshayo. Phakathi nenkathi kaKhisimusi (ikakhulukazi uma ushiya izwe) I ezivame, kubasebenzisi njalo ... NO BBM! Futhi Ngadumala lapho kuqala turning on Torch, wathola ukuthi BBM ngaphambilini pre-efakwe kule smartphone. Yini, yini eniyicela ??? Yebo, kuyiqiniso, ngisho nabantu abanamandla universal search Torch ayikwazanga ukuthola BBM (bheka. ISITHOMBE ngezansi). Isimo iye yaqhubeka iwohloka iqiniso lokuthi OS 6 uphawu iphutha elibi kakhulu ohlelweni, esixwayisweni akunakwenzeka thwebula BBM kusukela RIM (Iphutha 907). Uma ngineminyaka esimweni, noma okubi nakakhulu, ngaphandle kwezwe, kungaba inhlekelele ngami.
Ngadumala waqhubeka uma 9800 wanika engavumelekile "screen white" ezimweni 5 ezahlukene; Ibhethri multilayered wayesekhathele kuphela usuku lwesonto.
I emisha enhle kakhulu kimi njengoMphathi isihambi zimi kanje:
Ukucinga Universal: Lapho ngihlelile ukuthi ngizoyisebenzisa emzini omusha kimi, mina ngokuvamile akudingeki isikhathi dally. Ngidinga izimpendulo, izinkomba, oxhumana nabo, futhi njalo MANJE! Ukucinga Universal kukuvumela usebenzise igama idivayisi "ngalezi zinhloso". Lena ngempela enye yezinzuzo ezibaluleke kakhulu, okuyinto ukhuluma esivuna OS 6. Universal Ukucinga kusiza abasebenzisi uzule izikrini ahlukahlukene 2-3 / amakhasi ngokushesha futhi sikusize uthole kahle ukuthi yini oyifunayo. Universal search sici ukuthi lungatholakala ngqo kusuka ikhasi lasekhaya ngokuvula Torch izimpendulo zakho zilula Beya (slide movement) kanye ukuthayipha umbhalo ofuna ukucinga. Kungakhathaliseki kungcono isicelo, oxhumana nabo, izithombe, i-imeyili, umbhalo, cinga inethiwekhi, njll Lesi sici esimangalisayo angasindisa isikhathi esiyigugu eziningi umzamo. It is a owaziwa search engine "inaliti in a inqwaba" for smartphone 9800.
Keyboard: I ngempela uthanda iqiniso lokuthi Torch ine ikhibhodi ngokomzimba on-screen. Le nkampani kuthathwe ikhambi ephelele ukwenza ikhibhodi "touch hlobo", beletha endaweni ngaleyo ndlela ubuchwepheshe "surepress" "RIM sika" ( «ngiqiniseka ecindezeleke kanzima"). Angifuni ukuba bakutshele indlela umsindo ukuchofoza phakathi nohambo 3 ihora ukusuka eLos Angeles Las Vegas ecasulayo; nakakhulu - 5-6 flight ihora (nge ukuzinza indiza inkambo). Abanye abantu ibhizinisi abakwazi ukugcina ukulutheka kwabo CrackBerry ngaphansi kokulawula. Kule ndaba, ikhibhodi manje enikeza ukusetshenziswa buthule smartphone.
Battery: Battery life BlackBerry Torch 9800 akuyona ejwayelekile BlackBerry Smartphones. Ukuphila battery smartphone kungaphezu kungaba ozibongayo, mhlawumbe, Apple kuphela. Ngaphansi kuka 16 amahora emva "ukusetshenziswa njalo" isinciphisi abadinga "lixhunywa khona kugesi" ishaja. Angiyena yini mina ngomsebenzi ibhizinisi noma nje kokuhamba ubumnandi, mina ngiyakube ngikuwe njalo e motion — kusukela ekuseni kwaze kwahlwa sekwephuzile. Futhi isidingo ashona kudivayisi yami kuzoba isicefe isigqi enjalo.
Zokuthinta isikrini: esithintwayo interface / screen idinga ukuba ubuhle. Esithintwayo ekhona - it Nokho, ngokuqinisekile eqa omkhulu phambili, uma kuqhathaniswa ne-iPhone, i-touch screen smartphone BlackBerry kan- ngokucacile ngemuva kwezentuthuko. Nokho, kulezi zimo, ebukhoneni isiqeshana sokuhambisa iminwe singena esikhundleni saleTitatimende imisebenzi eminingi kwesikrini touch. Trackpad 9800 smartphone ivumela umsebenzisi ukusebenzisa isikhombisi for ukunemba kakhudlwana ngombala isenzo esibukweni.
Izicelo zokuxhumana kanye nezingosi zokuxhumana nabantu, yokudlela ukubhuka, Google Maps and Twitter wasebenza lemukelekako e BlackBerry 9800 yami entsha Torch. Ngangineminyaka kancane badumazeke ukuthola ukuthi TXTLater isicelo kanye World Mate ayisekelwe futhi akukho smartphone entsha in 9800. WorldMate kugcina isimiso sami ikhambo labo abangase babe umbhangqwana ezidlule zeminyaka. Lokhu kuyinto enhle! Ngokuqondene BBM isicelo, okudingeka ngikwenze ne operation idivayisi "ukususa bese faka".
Ukuyiqonda injongo yangempela yokunikezwa ngebuhle nebubi Torch smartphone, Ngingamchazela batusa kuwe, afuna ukuyicela kimina? Hmm ... lokho umbuzo omuhle kakhulu ... futhi mhlawumbe kancane ngokuxhamazela kakhulu ukunikeza ukulinganisa olunembile. Like Smartphones iningi, BlackBerry amadivaysi iya ngokuya wancika ngokwengeziwe ukuba khona kanye nenombolo kwezicelo, ukubhalisa, ukuze, njll .. Naphezu kweqiniso lokuthi entsha OS 6 kubonisa ngcono ephawulekayo, namanje iqukethe ezinye izimbungulu namaphutha. Ngezikhathi ezithile, lesi OS ibonakala kunalokho "kunezinxushunxushu", ngombono wami, ukuthi kungaba ekugcineni kube imigomo kungakhungathekisa kakhulu ethize abasebenzisi. Ngesikhathi esifanayo Ngithanda isiqondiso wenkampani, ekhuphuka nge kwesiqubulo esithi "Konke kungenzeka ukuba uhlaziye". Ngikholelwa ukuthi namanje ekuseni kakhulu ukucabangela ukuthi ingabe nebhere Torch / OS 6 inzuzo kumsebenzisi. Kuleli qophelo kusobala ukuthi kukhona ukuntuleka ukwesekwa 6 yesikhulumi OS.
Angikwazi nakanjani ukusho noma ngiziphumelelisile noma cha Torch kusukela 9800 / OS 6 Siye sakhululwa muva, nokuningi kuseza.
Ngikholwa ukuthi ngaleso sikhathi, Torch isinciphisi neze kube ngukulunga "gxuma kathathu", kushiwo isiqubulo ukukhangisa. OS 6 usasebenza ezinamaphutha futhi kubangele ezinye ukukhungatheka. Ngokuvamile, ngifuna ukufunda indlela ukusebenza kahle BlackBerry futhi wenze izinto naso. Mhlawumbe nginganenzela BlackBerry traditionalist noma purist, kodwa nje ngifuna yami BlackBerry kwenza izinto zaba lula, hhayi izinkinga it.
Buhle / nebubi
zokuthinta isikrini Full, ingene esikhundleni ubuchwepheshe "surepress"
5-megapixel ikhamera (ikuvumela ukuba wenze izithombe eliphezulu)
reset Ngokushesha (qala kabusha)
Noma kunjalo ikalishi ikalishi
isikhombimsebenzisi Touch idinga nokwenza
BBM is hhayi pre-efakwe
Cishe ayisekeli isicelo OS 6 (kuze kube yimanje)
Life Battery (1 usuku esiphezulu)
ukushaja Daily kuyadingeka ngenxa yalokho "Ukupholisa ngomoya 'zedivayisi
OS 6 is kubonakala "esingahlelekile"
Ayikho support for ezinye izicelo ezibalulekile (maduze ukuba ixazululwe)
ukutholakala Limited izesekeli (maduze ukuba ixazululwe)
Njengoba sazi konke bokwenza kanye izinzuzo smartphone / new OS njengoba kuqhathaniswa lonalo, kumele wamfaka nje 3 amaphuzu on ngezinga 5-iphuzu (ukucabangela ukuthi kungenzeka engenzeki of Ukuthuthukela 4 amaphuzu afanele bokusekelwa new OS 6 zizonikezwa).